BEERKA SHINNIDA IYO SHARAXAADDA - BEEKEEPING
Haddii riyadaadu tahay mid udub dhexaad u ah, markaa marka hore waxaad u baahan tahay inaad ogaatid waxa dabiiciga ah ee jiraa iyo waxa ay yihiin faraqa u dhexeeya iyaga. Xayawaan kasta waxaa lagu kala soocaa waxqabadka, dabeecadda, iska caabinta barafka, iyo sidoo kale muuqaalka.
Ilaa hadda, adduunka oo dhan waxaad tirin kartaa laba nooc oo shinni ah. In this article waxaan muujinaynaa noocyada ugu caansan ee bees.
Dhammaan noocyada jaalaha ah ee Ermeniya, Georgia, iyo Azerbaijan waxaa loo aaneyn karaa jinsiga cagaarka ah ee shinnida. Midabka jidhka ee bees waa midab leh oo ku yaal siddooyin huruud ah. Hal shin hal maalin ah oo miisaankiisu yahay 90 mg, iyo proboscis waa 6.6-6.9 mm. Miisaanka ilmagaleenka maqaarku waa 180 mg, iyo tan uurjiif - 200 mg.
Ma taqaanaa? Bacriminta ilmo-galeenka of this bees this of bees waa ciil baxay: waxay gaari kartaa ilaa 1,700 ukunta maalin kasta. Gawaarida ilmagaleenka waxaa badanaa laga beeraa qaybta hoose ee malabkii.
In diirran, cimilada khafiifka ah, shinni Cajal ah oo jilicsan ayaa dareemaya raaxo. Jiilaalka xilliga qaboobaha ah ma aha kuwo iyaga loogu talagalay. Guryaha dabiiciga ah, heerkulka ilaa +8 ° C, waxay samayn karaan duulimaadyo jiilaal. Isticmaalka malabka xilliga jiilaalka aad ayuu u hooseeyaa. Guga horraantii, waxqabadka qoob-ka-ciyaaro ee jaalaha ah ayaa si firfircoon u kobcaya.
Waxtarka noocan ah ee beeska waa wanaagsan, waxay sii daayaan ilaa 10 rashka ah oo awood u leh inay ku dhajiyaan ilaa 100 unugyada boqoradda. Beereyaal qibrad leh ayaa sheegaya in ay jiri karto 2-3 malabood oo raxan ah, ka dib markii rooga shimbiraha ka soo galaan rugta, waxay ka tagaan ilmagaleenka ugu wanaagsan, halka dila inta kale.
Abuurka Cagaarka Cagaaran waa mid aad u nabdoon. Marka baadhaya buulasha shinni ah, boqoraddu ma joojiso shaqadeeda, shinnihuna ka baxaan. Frames si ballaadhan propolis, tegaayo qoyan, madow mugdi ah-malab ah.
Bees waxay si fiican u xadidaan oo waxay weerari karaan qoysaska kale, waxayna ku ilaaliyaan meelahooda si xun. Waxay awood u leeyihiin inay soo saarto propolis iyo si fiican manka, si firfircoon uga shaqeeya, waxay qaadan karaan badan oo malab ah. The malab ah ee bees yihiin hooseeya. Waxay si dhakhso ah u beddelaan hal laaluush mid kale, waxqabadka cimilada xun ma yarayn. Waxay la qabsadaan cimilada kulul, iyo sidoo kale gaadiidka.
Dhallaanka Central Ruush ee bees maanta waa ku fiday dunida oo dhan, si kastaba ha ahaatee Central iyo Waqooyiga Yurub waxaa loo tixgeliyaa dalkooda. Bees dhalinyarada ah ee this caan waa weyn, waxay ku miisaan kartaa ilaa 110 mg. Jidhka shinni waa mugdi madow, oo daboolay timo dheer oo dherer ah, 5mm dheer, iyo proboscis - ilaa 6.4 mm. Marka ay soo weerarto shinni, waxay u difaaci karaan buulka bukaanka si xun oo aan awoodin inay wax ka xadaan dadka kale.
Waa muhiim! Kuwani waa kuwa beenta ah ee cadhaysan: marka ay kormeeraan buulooyinkooda, waxay u dhaqmayaan si firfircoon, iyagoo ka tegaya malabyo, oo waxay ku fadhiisanayaan kooxo hoose oo hoose.
Buul-qalabka propolisut ee dhexdhexaad ah. Waxay si fiican u isticmaalaan laaluushka. First of dhan, shinni ka buuxin dukaanka malab; haddii meesha ay ka buuxsanto, waxay isticmaalaan buulka, iyagoo yareynaya taranta taranka. Haddii ay lumiyaan ilmo-galeenka, ka dibna qoysaska muddo dheer ma ahan shinni-joogtu.
Si ka duwan noocyada kale, beekha Ruush ee Central waxay awood u leeyihiin inay u adkeeyaan dhaxan ka fiican kuwa kale. Tan iyo xilliga qaboobaha carbon dioxide waa 4%, taasi waxay keenaysaa xaqiiqda ah in beesku nasanayaan, yaraynta waxqabadka. Nooc noocaan oo shinni ah waa mid aad u wanaagsan. Inta badan, badh ka mid ah apiary waxay ku jirtaa xaalad deg deg ah.
Bees waxay ka soo ururiyaan malab laga bilaabo buckwheat, linden iyo heather. Iyadoo wax soo saarka, waxay ka badan karaan noocyada kale ee shinni. Shaabadda malabku waa caddaan. Waxay qaadan karaan tiro badan oo ah manka si ay u helaan wax wanaagsan.
Caymiska Mountain Gray Caucasian
Cawska Cawaanka ee Caucasian ee bees ayaa ka helay meel u ah gobollada buuraha ee Transcaucasus iyo Caucasus. Bees ee noocyada this yihiin kuwo aad u nabdoon. Waxay leeyihiin tijaabada ugu dheer - illaa 7.2 mm. Miisaanka looxa shaqeeya hal maalin ayaa gaaraya ilaa 90 mg, dheddigga uurjiifka illaa 200 mg, iyo maqaarka - ilaa 180 mg. Fecundity of dheddigga u gaaro ilaa 1500 ukunta maalin kasta.
Nest propolisovano fara badan, malabka signet waa qoyan, midab madow. Caanahan tani waa shinni inta badan waxay weeraraan hudhooyinka kale, waxayna si fiican u difaaci karaan. Haddii aad eegto hareeraha buunshaha, waxay u dhaqmi doonaan saaxiibtinimo, iyada oo aan la joojin doonin shaqada shanlooyinka, xataa haddii aad hesho. Muuqaal farabadan oo noocyadaas ah waa in ay ururiyaan nectar aad u wanaagsan. Iyadoo aan dhibaato lahayn, waxay ka heli karaan ilaha laaluushka, si dhakhso ah u beddelaan dhirta ku jirta nectar laga helo.
Iyadoo qarsoodi ku filan ee nectar ka soo buckwheat iyo linden, ma dhaafaan celcelis ahaan Ruush Ruush ee wax soo saarka. First of dhan, malab waxaa lagu soo ururiyey qaybta ubax ee buulkeedii, ka dibna ku kordhiyo. Wax soo saarka ee beeska Cajiibta Cajiib ah waa hooseeya, kaliya 4-5% waxay noqon kartaa raxan. Laakiin awood u leh in ay jiifaan 8 illaa 20 unugyada boqoradda.
Way sahlan tahay in laga baddalo rashka ilaa mid shaqeynaya shinni. Haddii beesku ka badnaado dalalkooda hooyo, markaa waxay u nugul yihiin dhaxan, marka la barbardhigo bartamaha Ruushka. Gaadiidka si fiican u dulqaado.
Guryaha noocan ah ee beesku waa Carpathians. Jirka jirka shimbir waa mid cirro leh, proboscis waa 7 mm dheer, miisaanka shaqooyinka shaqeeya waa 110 mg. Ilmo-galeenka uur-jiifku wuxuu miisaankiisu dhan yahay 205 mg, iyo muraayada - 185 mg. Waqtiga gu'ga, marka xoojinta horumarka qoysaska uu sarreeyo, fowdo ee ilmo-galeenka ayaa gaari kara ilaa 1,800 ukumaha maalintii. Tilmaamaha shinnida waxaa ka mid ah inay awoodaan inay bilaabaan shaqo ururinta da 'yar. Bees ururiyaan nectar, kuwaas oo ku jira sonkorta yar. Qoryaha Carpathian waa kuwo aad u nabdoon, waxay isdejiyaan marka ay baaraan buulka, iyaga oo aan joojin shaqadooda, waxtarkooda way hooseeyaan.
Shaabadda malabku waa cad oo qallalan. Waxsoosaarka qoysaska waa mid sare, wuxuu gaari karaa ilaa 40 kg. Beeraha carpathian ayaa si sahlan u heli kara ilaha laaluushka, si deg deg ah uga beddelaan midba midka kale, adigoo aan ku jirin raxan. Si kastaba ha noqotee, haddii cimiladu ay cakirantahay, shinni ma duulaan laaluush.
Beeraha Carpathian waxay ka hooseeyaan marka la eego wax soo saarka beeraha Talyaaniga iyo Ruushka. Marka la weeraro buulkuna si fiican ayuu u ilaaliyaa, inta uu u nugul yahay xatooyada. Ururinta manka ee suntan waa mid hooseeya. Beeraha Carpathian waa kuwo aan waxtar lahayn oo aan aboor ku dhejin, sidaas darteed waa inaad fiiro gaar ah siisaan combiyeyaasha cayayaanka.
Ukriga ah ee Ukraine ee bees ku nool yihiin aagga ka mid ah aagga kaynta-steppe ee Ukraine. Jidhka shinni waa midab khafiif ah, dhererka proboscis wuxuu gaaraa 6.63 mm. Miisaanka ilmagaleenka maqaarku waa 180 mg, iyo in ilmaha uurjiifku yahay 200 mg. Fogundhiga ilmo-galeenku wuxuu gaaraa ilaa 2300 oo ukun ah maalintii, halka uu kordhi karo uruurinta ugu muhiimsan ee malab ka lime, acacia.
Waqtiga gu'ga, qoysaska ayaa si tartiib ah u kobcaya, sababtoo ah ma ku duulaan cimilada qaboobaha. Marka laga eego shinnida cayayaanka ayaa si deggan u dhaqmeysa, laakiin maaha kuwo ammaan ah sida kuwa cafiska ah ee cawliga ah. Buulada qolofta dhexdhexaad ah, goosashada malab dhexdhexaad ah.
Shaabadda malabku waa cad oo qallalan. Xilliga cimilada, shinni ma u duulaan nectar. Marka wakhtigu yimaado beergooyska ugu muhiimsan ee malab, shinni waxay bartaan gabbaldayaha, kaas oo ku kora Ukraine ee tiro badan. By ururinta nectar, shinni Yukreeniyaan ka duuli kartaa apiary ah 5 km.
Tani waa mid dhexdhexaad ah. Bees ma rabaan inay wax xadaan, laakiin marka weerarka, waxay si fiican u ilaalin kartaa buulkeedii. Goosashada maaddada manka ayaa hooseysa. Wax soo saarka of bees Yukreeniyaan waa wax fiican, ilaa 40 kg. Beereyaal qibrad leh ayaa soo tebiya 120 kg aruur ah. Cadaadiska barafku aad ayuu u sarreeyaa. Gaadiidka si wanaagsan ayaa loo dulqaataa.
Wadanka talyaaniga ee jilicsani waa talyaani casri ah. Dhammaan noocyada of bees malab ah ayaa loo baahan yahay, laakiin noocyada this waa kuwa ugu caansan dunida. Waxaa jira dhowr nooc oo shinni talyaani ah: cawl, saddex-strip iyo dahab. Tani waa shinni weyn oo weyn, miisaanka shaqaaluhu wuxuu gaarayaa 115 mg, iyo proboscis ilaa 6.7 mm. Tirada haweenka gabdhaha ah waa 190 mg, ilmaha caloosha waa 210 mg. Fogundhiga ilmo-galeenku wuxuu gaaraa ilaa 2500 oo ukun ah maalin kasta, oo tiro badan oo ah miro-dhasho.
Marka baadhaya buunshaha buulkoodu waa nasasho. Waxay u sahlan tahay shinni si ay u hesho ilo nectar u dhow buulkaba, si ay badanaa u xadidaan qoysaska deriska ah, oo ay si fiican u ilaaliyaan buulkooda. Tani waxay leedahay wax soo saarka wanaagsan, waxay si fudud uga beddelan kartaa ilaha kale laaluush kale.
Horumarku wuxuu bilaabmaa guga dambe wuxuuna soconayaa ilaa dhammaadka xagaaga, kaas oo siinaya fursad ay ku dhisi karaan qoysaskooda. First of dhan, shinni ka soo ururiyaan malab ee fidinta sare iyo qolofka, iyo marka ay buuxsamaan, ururinta waxaa loo wareejiyo buulka.
Malabka calaamadaha waa qoyan, cad ama cawl. Cimilada aan fiicnayn ee nectar ma duuli. Waxay dhistaan ​​qurux badan, xitaa, malab fiican. Tani ma ahan propolis soo go'ay iyo manka. Bees-ka Talyaanigu wuxuu leeyahay wax-soo-saarka dhexdhexaadka ah.
Waa muhiim! Tan iyo shinnida waxaa lagu hagaa midab, mana ahan meel, waxay u duuli karaan xaglaha deriska ah.
The bees of this caleen waa thermophilic iyo sidaas darteed si liidata u adkaysata dhaxan. Gaadiidku si liidata u dulqaado.
Karnik, ama Krainskaya
Karnik ama Krajina jilicsan ee shinni ah ee ku nool Austria iyo Yugoslavia. Jidhka shinni waa midab madow, dhererka proboscis wuxuu gaaraa 6.8 mm, culeyska shimbirta shaqadu waa 110 mg. Ilmo-galeenka yar-yar ayaa miisaankiisu yahay 185 mg, iyo uurjiif - 205mg. Fogundhiga ilmo-galeenku wuxuu gaarayaa 200 ukumood maalintii.
Muuqaalka muuqaalku waa nabadgelyada karnikas, laakiin markay kormeeraan malabkii, waxay u dhaqmaan si aan caadi aheyn oo si joogto ah u dhaqdhaqaaqaan. Beeha shimbiraha ayaa dhexdhexaad ah, haddii aysan jirin laaluush, waxay kordhisaa. Horumarinta qoysaska ee shinni ahaan waxaa lagu tilmaami karaa qiyaas ahaan: qoysku si dhakhso ah ayuu u koraa, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad haysatid wakhti aad ku ballaariso buulka oo aad bilawdo aruurinta. Marka ururinta malab, marka hore oo dhan, waxay buuxiyaan jirka buulka, ka dibna kaliya oo kordhiya iyo jidhka sare.
Malabka calaamadda ayaa qoyan, laga bilaabo madow ilaa cadaan. Xaaladaha aan fiicneyn ee laaluushku kama baxayaan. Krajina bee waxay jeceshahay tabar yar, laakiin ururinta malabka dheer, gaar ahaan haddii laga soo qaado dhibicda. Marka laga hadlayo caabbinta barafka, waxay udhexeeyaan beeraha Ruushka iyo Caucasian.
Beeraha dib u dhiska ayaa ah kuwa ugu caansan oo la aqoonsan yahay aduunka oo idil, dabeecadooda waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican. Waa shaqo aad u adag oo aan lahayn wax shar ah. Bees waxay ku xidhan kartaa xaalad kasta, laakiin inta badan dhammaantood waxay jecel yihiin roobka. Markii hore, waxaa loo isticmaalay inay la dagaallamaan shilinta oo ay ku hanjabeen shuban jidhka. Dhibbanaha oo dhan wuxuu u dhiman karaa bukaan-dejiyahan.
Ma taqaanaa? Tani waxay keentay jimicsi British ah. Si uu u helo nooc cusub, wuxuu ka gudbay beeska mugdiga iyo talyaaniga, iyo natiijada, jilicsanaanta, jilicsanaanta ah ee buckfast u muuqday.
Backfast waxaa laga soo qaatay taranka Talyaaniga, sidaas darteed waxay leeyihiin wax badan oo caadi ah. Farqiga keliya ayaa ku jira midabka mugdiga ah ee bakiijka, cabirkooda iyo dhererkoodu waa isku mid. Beekhaamadu waxay u dulqaadanayaan baraf xumo, laakiin waxay u adkeysanayaan cudurrada. Dareen weyn oo nabad ah, nabadda jecel, ha ku weerarin shinni kale.
Caan ku ah wax soo saarka sare ee wax soo saarka malab, soo qaado badan oo manka, maalin dhan. Mid ka mid ah ilmo-galeenka ayaa ukun dhigi kara waqti dheer. Ha cabsanin dabaysha, roobka, qulqulka. Xayawaanka dibedda xitaa xilliga dayrta, heerkul ah +10 ° C, wuxuu ururiyaa manka iyo nectar. In hudheellada yaryar ee propolis yar, si ka duwan talyaaniga.
Ma taqaanaa? Xayawaanka cagaaran ee bakteeriga ah ayaa ku duugi kara nuucyada kale.
Waxaad baari kartaa buulka bukaanka wakhti kasta. Marka baadhaya beeska buulkaba xor ka ah qaybta sare ee qaabka. Marka la barbardhigo beeska Talyaaniga, Bakriga beeraha ee Janaayo wuxuu ku jiraa buulka, isagoo sugaya cimilada diiran.